RASMI: Garsooraha Kulanka Juve vs Real Ee CL Oo La Shaaciyay %
Ninka reer Turkish ee lagu magacaabo Cunet Cakir, ayaa wuxuu Garsoori doonaa ciyaarta adag ee udhaxaysa kooxaha kubada cagta ee Juventus iyo Real Madrid, taasoo ka tirsan wareega Sideed dhamaadka Champions League.
Cakir ayaa wuxuu ahaa mid heerka Garsoornimada ka gaaray heer sare wuxuuna ahaa tan iyo sanadkii 2007-dii, waxaana uu kamid yahay garsoorayaasha reer Yurub ee dhex-dhaxaadin doonta ee kulamada koobka aduunka 2018.
Sideed kulan ayuu horey Cakir soo qabtay kulamo ay dheeleyso Real Madrid, kuwaasoo Afar kamid ah ay badisay Los Blancos, labo jeer oo bareejo ah iyo waliba labo jeer oo Guul daro ah, taasoo ah natiijo wanaagsan.
Juventus kaliya wuxuu kulamadeeda uu soo qabtay Cakir labo jer, waxaana kooxdaan reer Italy ay badisay Hal jeer halka mida kelana laga adkaaday.
Dhanka kale, Garsooraha reer Italy ee lagu magacaabo Daniele Orsato ayaa waxaa garsoori doonaa ciyaarta adag ee udhaxaysa kulanka xiisaha leh ee Sevilla iyo Bayern Munich, kaasoo isana ka tirsan wareega Sideed dhamaad Champions League.
Orsato oo 43 sano jir ah, ayaa wuxuu ku jiraan xirfadaan tan iyo 2012, isagoona heerar kala duwan oo dhanka Garsoorka ah soo maray.
Wuxuu hada ka hor uu soo qabtay kulamada Sevilla labo jeer oo kala ah: March 14, 2017, markaasoo ay guul daro 2-0 ay kala kulmeen Leicester, iyo March 12, 2015, oo guul weyn oo 3-1 ay ka gaaraan dhigooda Villarreal xili uu ahaa wareega 32-da Europa League.
Juventus vs Real MadridSevilla vs Bayern Munich
Shaxda Rasmiga Ah Ee Arsenal vs Stoke: Yaa Kusoo Bilowday?